10 Junichirou Kagami Mitanisa isaky ny Otaku mila jerena - Hafa
Teny 10 Junichirou Kagami feno lesona lesona momba ny fiainana sy aingam-panahy
Tsy misy toa ny fananana Otaku ho an'ny mpampianatra an-tsekoly. Indrindra rehefa manentana ny mpampianatra io ary mahay manao izay hahaliana ny mpianany.
Izany dia mamaritra Junichirou Kagami avy amin'ny anime nantsoina tsara: Ilay Mpampianatra Otaku Farany.
Na kamo aza, hendry izy. Ary na dia milamina aza izy dia mahira-tsaina, be fientanam-po ary manana ny sainy samirery.
Raha mbola tsy nijery ianao Denpa Kyoushi , fampisehoana mahafinaritra mendrika hijerena azy io. Miorina manodidina ny sekoly sy ny hatsikana.
Saika ny fizarana tsirairay dia feno lesona amin'ny fiainana azontsika rehetra ianarana avy.
Indrindra raha karazana Otaku / gamer ianao.
Eto dia 10 amin'ny teny nindramina tsara indrindra an'i Junchirou Kagami hanomezana fatra aingam-panahy.
Junichirou Kagami Quotes # 1
'Aza mihetsika satria misy zavatra mahaliana, fa mihetsika satria te hahita zavatra mahaliana kokoa ianao.' - Junichirou Kagami
Ny fikatsahana mahita zavatra mahaliana dia mahafinaritra sy traikefa nahafinaritra azy irery.
Junichirou Kagami Quotes # 2
'Ary toy ny lalao, na dia tsara toa inona aza ny filahanao milahatra amin'ny fiainanao, dia misy zavatra hitazona anao hatrany amin'ny rantsan-tongotrao.' - Junichirou Kagami
Tsy izany ve no mahaliana ny zavatra?
Junichirou Kagami Quotes # 3
'Tsy afaka mandresy lalao ianao raha tsy manao na inona na inona. Ary raha olon-kafa no mandresy ho anao dia tsy nahavita na inona na inona ianao. Toy izany koa ny fiainana. ” - Junichirou Kagami
Zavatra maro izay mihatra amin'ny lalao video no mihatra amin'ny fiainantsika koa.
Junichirou Kagami Quotes # 4
“Tsy mandray andraikitra amin'ny hoavinao ny sekoly. Tompon'andraikitra feno amin'ny hoavinao manokana ianao. Izany no antony tsy maintsy ahitanao izay tianao hatao. Afaka daholo ianareo! ” - Junichirou Kagami
Ary mpampianatra maro no tsy hilaza aminao izany amin'ny fiarahamonina maoderina.
Junichirou Kagami Quotes # 5
“Ny tena fahafinaretana dia ny fanosehana tsy an-kijanona mihoatra ny fetranao. Ka raha mieritreritra ny zava-drehetra ho lalao ianao dia tsy ho afaka hiaina izany tanteraka. ' - Junichirou Kagami
Ny lalao dia mametra anao amin'ny farany. Saingy ny fiainana ihany dia voafetra amin'ny halavirana tianao haleha.
Junichirou Kagami Quotes # 6
“Miaina amin'ny lalànanao manokana. Ary maneke ny zava-misy azonao. Raha vitanao izany dia anao ny ho avy. ” - Junichirou Kagami
Junichirou Kagami Quotes # 7
'Aza mieritreritra fa amin'ny fanarahana ny lalàna dia ho tonga soa ho an'ny fiarahamonina ianao. Tsy misy lalàna ho antsika, misy azy ireo ho an'ny 'olona nanao azy' sy ny 'zava-misy' ary 'ho avy', izay fehezin'ny lainga ireo. Manakana anao tsy hahatratra ny fahaizanao feno izy ireo. Izay no antony, raha misy ny ho avy tadiavinao dia iadio izany! ” - Junichirou Kagami
Marina izany. Miaro anao ny lalàna. Fa ny fanarahana ny lalàna rehetra dia hametra sy hametra ny halaviranao ihany.
Junichirou Kagami Quotes # 8
“Ny fihetseham-ponao manokana no zava-dehibe indrindra rehefa mankafy ireo zavatra mahaliana amin'ny fiainana. Raha manaraka izay lazain'ny olon-kafa hatao fotsiny ianao, na manao izay nolazainao fotsiny dia tsy ho afaka mankafy ireo zavatra tianao akory ianao. ' - Junichirou Kagami
Fantatrao ny fahatsapana. Manao araka ny nolazaina taminao ianao, izay mifanohitra amin'izay tianao hatao manokana.
Ary avy eo ianao sisa no mahatsiaro tsy afa-po, tezitra, na sosotra amin'ny tenanao mihitsy aza.
Izay no maha-zava-dehibe ny fametrahana ny tenanao ho lohalaharana (na farafaharatsiny manao ny tenanao ho lohalaharana).
Junichirou Kagami Quotes # 9
Na aiza na aiza misy anao dia tsy maintsy manana hery hanohizanao manao ireo zavatra tianao hatramin'ny fotoana farany ianao. ” - Junichirou Kagami
Junichirou Kagami Quotes # 10
'Tsy natao hifaninanana ny lalao. Izy ireo dia zavatra tokony hifehezana. ' - Junichirou Kagami
Ary izany no mahatonga ny fanamby maro tsy maintsy resena. Farafaharatsiny mba fomba fijery azy io!
Iza amin'ireo teny nindramina no tianao?
Raha mbola tsy nijery an'i Denpa Kyoushi ianao dia omeo sary izany ary jereo ny fomba itiavanao azy.
Mifandraika: 5 amin'ireo re tsara indrindra: mpamorona Anime Quotes